भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत युवा कोरोनामुक्त : RajdhaniDaily.com
Home प्रमुख भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत युवा कोरोनामुक्त
चितवन । कोरोना भाईरसको संक्रमण देखिएपछि भरतपुर अस्पतालको आईसोलेसन कक्षमा रहेका दुई जना मध्ये २७ वर्षका युवा कोरोना भाईरस मुक्त भएका छन् । दुई पटक गरिएको पिसिआर परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ देखिएपछि उनी भाईरसमुक्त भएका हुन् ।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लिला पौडेलका अनुसार लगातार दुई पटक गरिएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको हो । उनलाई शनिबार दिउँसो औपचारिक रुपमा डिस्चार्ज गरिएको छ । भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.श्रीराम तिवारीले ती युवालाई डिस्चार्ज कागज हस्तान्तरण गरेका थिए ।
राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ८ निवासी ६५ वर्षिया आमा र २७ वर्षिय छोरामा कोरोना भाईरस देखिएको थियो । उनीहरुलाई बैशाख ५ गते भरतपुर अस्पताल ल्याइएको थियो । उनीसँगै रहेकी उनकी आमाको दोस्रो पिसिआर परीक्षण भने पोजेटिभ नै देखिएको छ ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपनि ति युवा अस्पतालकै आईसोलेसनमा अलग्गै बसेका छन् । आमा अस्पतालमै रहनु पर्ने भएकाले उनी आमालाई कुर्ने गरी अस्पतालकै छुट्टै क्वारेन्टाईनमा वसेका छन् ।
सुरुमा आमामा -यापिड डाईग्नोष्टिक टेष्टमा शंकास्पद देखिएपछि आमा र दुई छोराको पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो । भरतपुर कोडिभ १९ प्रयोगशालामा आमा र एक छोराको पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरुलाई भरतपुर अस्पतालको आईसोलेसनमा निगरानीमा राखिएको थियो । भरतपुरबाट स्वाब थप परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउँदा त्यहाँ पनि नतिजा पोजेटिभ आएको थियो ।
परीक्षण अघि आमा र दुई छोरा अस्पतालमा रहेको भए पनि एक जना छोरालाई नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई तत्कालै डिस्चार्ज गरिएको थियो । शरीरबाट भाईरस मुक्त भए पनि केही समयसम्म एन्टीवडि रहने भएकाले नेगेटिभ देखिएपछि पनि कम्तिमा एक साता क्वारेन्टाईनमा राख्नुपर्ने चिकित्सकको भनाई छ ।
चैत ३ गते बेलायतबाट यी आमा छोरा हङ्कङ हुँदै नेपाल आएका थिए । दुई दिन काठमाडौं बसेर उनीहरु घर आएका थिए । परिवारका सदस्य, उनीहरुसँग निकट भएका एम्बुलेन्स चालकदेखि अन्य व्यक्तिहरुलाई हाल राप्तीको ब्रम्हनगरको क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । -यापिड डाईग्नोष्टिक टेष्टमा सबैको नेगेटिभ देखिएको भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
जिल्लामा कोरोना रोगको उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल र भरतपुर अस्पताललेनै सञ्चालन गरेको छुट्टै भरतपुर कोरोना बिषेश (अस्थाई)अस्पताललाई तोकिएको छ ।
काठमाडौँ । राजनीति गरेरै ७० वर्ष उमेर पार गरेका बामदेव गौतम अहिले एमाले एकताको पहल गर्छु भनेर बसेका छन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका गौतम एमालेको...
सारा विश्व जगत्लाई चुनौती दिँदै आइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिरहेको अवस्थामा हामी पनि बिस्तारै–बिस्तारै थप संकटतिर धकेलिइरहेका छौं । यो संकट पूर्ण...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय...
Breaking News Prem Shyangtan - March 8, 2020 0
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - August 28, 2020 0
काठमाडौँ । नेपालमा शुक्रबारसम्म ७१ जना पत्रकारमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सुदूरपश्चिमबाहेक बाँकी ६ प्रदेशका ७१ जना पत्रकारमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको नेपाल...